Qarax xoogan oo ka dhacay Bartamaha Magaalada Muqdisho | Universal Somali TV
Qarax xoogan oo ka dhacay Bartamaha Magaalada Muqdisho
Afhayeenka ayaa xusay in ninka is qarxiyay uu ka faa'iideystay mashquulkii iyo ciriirigii xilligaa ka jiray waddada, oo sida uu sheegay ay gaadiidka safaf ugu jireen kontoroolka, si amnigooda loogu hubiyo. Waxa uu intaasi ku daray in ninkaasi uu isku deyay inuu ku dhego gaari nooca aysan rasasta karin ah, oo xilligaa ku sugnaa waddada, uuna la socday Sarkaal ka tirsan Ciidanka Xoogga Dalka oo lagu magacaabo General Garabey.
"Gaariga jananka ayuu isku dayay inuu ku dhego, laakiin gaariga oo xabadda aan karin awgeed wuxuu ku qarxay bannaanka, janankana waa caafimaad qabaa." Ayuu yiri Afhayeenka Ciidanka Booliska.
Kan-xigaGudoomiyaha Guddiga Doorashada Madaxw...
Kan-horeGudoomiye Aadan Madoobe oo xil u maga...
64,700,204 unique visits